Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ntọala mmanụ ọkụ diesel ọhụrụ nke Generac Mobile kwupụtara
Generac Mobile, onye isi na -emepụta ụlọ elu ọkụ mkpanaka, ndị na -emepụta ihe, ndị na -ekpo ọkụ, nfuli na ihe mgbochi nkwụsị uzuzu, kwupụtara taa iwebata nkeji mmanụ dizel abụọ ọhụrụ - MDE330 na MDE570 ndị na -emepụta ekwentị dizel, nke ezubere inye udo na arụ ọrụ. . Igwe ejikere maka mgbazinye na-egosipụta ọnụ ụzọ mepere emepe nke na-emepe emepe iji bulie ike ọrụ site na ikwe ka onye na-ahụ maka teknụzụ rute ebe ọrụ niile dị mfe. Nhazi nchara na ime ụlọ na -enye ohere ịrụ ọrụ maka ngwa dị iche iche, n'agbanyeghị ọnọdụ ihu igwe.
MDE330 nwere injin 9.3L Perkins Tier 4 nke enwetara asambodo ikpeazụ, ebe MDE570 na-eji injin 18.1L Perkins Tier 4 nke agbaziri agbazi. Injin abụọ a na-enye teknụzụ njikwa ibu Perkins Exhaust Temperature Management (ETM), na-ewepụ okwu nke ịkpakọba mmiri n'oge ọnọdụ dị ala yana nke na-enweghị ibu, nke nwere ike ime ma ọ bụrụ na igwe na-emepụta mmanụ na-abawanye ma ọ bụ buru oke ibu maka ọrụ ahụ. Ejiri injin ndị dị na Generac ọhụrụ MDE330 na MDE570 iji gbochie nchịkọta mmiri site na nleba anya na ịhazi okpomoku ọkụ na inye ọkụ ọkụ, dị ka achọrọ.
"Generac Mobile na -enye ike a pụrụ ịdabere na ya nke na -aga ebe ịchọrọ ya, na -enye ndị ahịa ntụgharị na njikwa iji nweta ọrụ ahụ - ebe ọ bụla enwere ike," Aaron LaCroix, onye njikwa ngwaahịa, Generac Mobile kwuru. "Site na injin dị elu na atụmatụ na-arụ ọrụ nke ọma, nkeji anyị na-enye ohere ka ọ gbatịkwuo ogologo oge yana ogologo oge ọrụ ka ị nwee ike nọrọ ogologo oge n'ọrụ, na-enweghị obere mmanụ na mmezi."
MDE330 na MDE570 nke Generac na-abịa ọkọlọtọ na nkeji oge ọrụ mmanụ na nzacha nzacha maka ibelata mmezi yana ibelata mgbada. Nnukwu mmanụ ọkụ na tankị DEF na -enye ohere oge opekata mpe awa iri abụọ na ise tupu achọ mmanụ, na -abawanye nloghachi na itinye ego.
Njirimara nhọrọ gụnyere ike ịmalite moto, ngwa ihu igwe oyi na nhọrọ nkesa ike ọzọ. Maka mgbanwe zuru oke, enwere ike ịhazi nkeji ndị a ka ha yie ihe, na -eme ka ike dịrị n'ike.
Onye njikwa PowerZone® Pro Sync na -abịa ọkọlọtọ na nkeji abụọ, na -enye onye ọrụ ohere inyocha arụmọrụ yana mee nchọpụta nyocha na otu. Onye njikwa ahụ dị mma na azụ igwe ahụ ihe dị ka ụkwụ 5, sentimita 6 site na ala na ụdị trailered maka ịnweta ngwa ngwa. Onye njikwa PowerZone® Pro Sync na-etinye njikwa igwe na ozi niile n'otu ebe, na ngosipụta ihuenyo mmetụ dị mfe iji gosi koodu nchọpụta yana ozi enyemaka.
MDE330 ọhụrụ na MDE570 ga -adị maka ịtụ na ịhota ihe na Q4 2021 ọ ga -adịkwa na mbupu na Q2 2022.